Chengetedza Inzvimbo yeHTML Kubva paHaters Kutora Mazano Akanaka Kubva Semalt. Icho Chero Sezviri nyore Sezvo ABC!
1. Chengetedza Maofirwo Akagadzirwa
Artem Abgarian, Mutungamiri Mukuru weVatengi vekubudirira Semalt ,anonyatsotenda kuti kuchengeta software yako yakarongedzwa ndechimwe chezvinhu zvinokosha zvinobatsira kuchengetedza webhusaiti kubva kurwisana nehacker.Mamwe makambani anosunungura nguva dzose mavara uye zvinyorwa zvekugadzirisa mishonga uye zvikanganiso mumapapuri awo akare - peru tours packages. Nokuva nechokwadi chokuti vanoruramisa cheromabhugi nemakomba mumutsetse, makambani aya anoderedza dambudziko rekurwiswa kwepurogiramu yavo. Saka, chero bedzi nzvimbo yacho inoita kutiiyo ine mahwendefa emangwana anotsigira iyo, inovimbiswa nehudziviriro humwe hunoita. Izvo zvinoshanda kune venzi vemaiti iyoshandisa zvitatu zvemapulazi. Mumwe anofanirwa kuita kuti ave nechokwadi chekuti vanoona zvavanenge vachidzokorora uye vanovimbisa kuti vanoramba vachigadziriswa panguva ipi zvayo. A sitemuridzi anoda kubvisa chero mapulagi ayo asisashandiswi kana kuti anodiwa sezvaanoshanda semagariro ezvigaro, izvo vaseki vangawana uyeshandisa kurwisa.
2. Kuvaka kuchengetedzwa kwekuchengetedza Pasi peSite
Mutsara wekutanga wezvidziviriro pawebsite ndeweWeb Application Firewall.Chinangwa chayo ndechekuongorora chero ipi zvayo inopinda motokari uye kubvumira chero zvikumbiro zvinoshungurudza. Pakupedzisira, nzvimbo yacho inochengetedza kunze kwekusvika kwekunyorwa kwei-cyberuye spam. Mukare, Web Application Firewalls yakanga iri mumhando yehurdware midziyo. Zvisinei, iyo makambani eEng Security-as-a-service(SECaaS) vakashandisa shanduro yegore sechinhu chine mari shoma yekupa webhusaiti chekuchengeteka, yakambowanikwa pane yebhizimisi level setups chete.Kupfurikidza nemagetsi emagetsi, chero kambani inogona kubvarura "Web Application Firewall" isina kuwedzera mari yezvimwe zvakadai sokuva nemugove wakatsaurirwakugadzira server. Aya ma-plug-and-play masangano akashandura zvinhu zvinoshandiswa zvinotungamirira nzira dzinodiwa nokuda kwemuenzi. Izvicloud-based Web Application Firewalls anozadza chisingaiti apo mumwe mupi wekugadzirira anokundikana..
3. Isa kuHTTPS
Hyper Text Protocol Secure ndeyekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kweprotocol kunoshandiswa kuchinjanaruzivo rwomunhu kana ruzivo. Kushandisa nheyo yeHTTPS kuita hutano pakati pewebsite uye musikana zvinoreva kuwedzera zvimweencryption layer kusvika kuTraat Layer Security (TLS) kana kuti Secure Sockets Layer (SSL). Icho chinhu chinowedzera kubhizimisi sezvazviriunovadzivirira kubva pakuedza kusanganisa, uye kune webhusaiti sezvo inoratidza vashandi kuti bhizimusi rinozvitsvakira pakudzivirira ruzivo rwavo.
Zvose zvinotengeswa paIndaneti zvinotanga pane imwe nzvimbo yeHTTPS. Nzvimbo yakasara yewebsite ndiyoHTTP kuburikidza. Zvisinei, izvi zvinogona kuchinja sezvo Google ichangobva kuwedzera kuti inotanga kushandisa HTTPS sechitsva chekutsvaga, iyo ichaitazvinoreva kuti nzvimbo dzakawanda dzewebhu dzichaita shanduko netariro yekuvandudza nzvimbo yavo paSERP.
4. Shandisa Pasiwedi Yakasimba uye Uzvishandure Nguva Dzose
Kune kuwedzera kunotyisa kwenhamba yekushungurudza kwechisimba kunoshandiswa nevashambadzikuedza nekufungidzira user password passwords. Imwe nzira yekuzvidzivirira nayo kubva kune yakadai ndeyokushandisa kwemashoko akapfuura uye akasiyana-siyana. Izvo zvinokoshakuti ave nemitemo iyi inoshandiswa kune admin, webhusaiti webhusaiti, uye pasi password pasi. Mumwe anofanira kugadzira password iyo inoshandisavanhu vakasiyana, uye zvinyorwa 12 zvakapera. Pakupedzisira, vashandisi vanoda kuchinja mapepa emafoni panzvimbo dzakasiyana-siyana kuti vaone kuti imwe inopetwa kavirikuchengeteka. Kunyora pasi mapepafoni kunoshanda zvakajeka sezvo zvichiita kuti zvive nyore kune vaseki kuti vawane mapepawedi mushure mokunge vakabudirira kuputsa.
5. Ita Mutungamiri weKutevedza Kuda Kuda
VaHackers vanorwisa zvinyorwa zvinyorwa kuti vawane dhesiyo pamusoro pewebsite. Nokushandisazvinyorwa zvinokambaira izvi, zvinyorwa zvadzo zvinoshandiswa kuedza kupinda mafaira aripo kuti akanganise kuchengeteka. A websitemuridzi anofanira kuve nechokwadi chokuti mazita anoshandiswa pane zvinyorwa anongowanikwa chete kune webmasters chete.